musha > Travel Europe > 10 Most Beautiful Coastal Towns In Europe
Iine Atlantic Ocean kune rimwe divi uye nemaguta anoyevedza pane rimwe, ari 10 maguta akanaka kwazvo emahombekombe muEurope ndiyo nzvimbo dzakanakisa dzekuzorora uye dzisingakanganwiki zororo. Kuzorora pamawere, kuteerera mafungu egungwa, kunyura mumvura yakachena yegungwa, kana kutsvaga ngano kuseri kwezviteshi uye shongwe, zviitiko zvakakosha zvaunowana chete mumahombekombe eItari, Furanzi, uye England.
1. Akanaka Mhenderekedzo yeguta MuItaly: Amalfi Coast
Idzo dzimba dzakakurumbira dzinoyevedza dzakatarisana neGungwa reTyrrhenian reguta reAmalfi dzakadhi-kadhi. saka, Amalfi anoisa pamusoro pese maguta eAmalfi emahombekombe seguta rakanakisa pamhenderekedzo muItari. Pamusoro pe, iwe uchaona kuti ndiyo inonyanya kurota nguva yezhizha muEurope. Izvi ndezvekutenda kune bhuruu mvura inopesana nemawere, uye nedzimba dzinovaraidza dzinogadzira iyo chaiyo mamiriro eanopukunyuka pagungwa.
Mukuwedzera, kana iwe uchida kuwana zvimwe, ipapo Amalfi Cathedral uye villa Rufolo, inopa anoyevedza maonero eGungwa reMediterranean negadheni. zvisinei, chinonyanya kukosha cheAmalfi ndiyo 40 maminitsi’ kutyaira kubva kuVietri Sul Mare kuenda kuPositano nemamwe ma maonero anoshamisa kwazvo yemahombekombe.
2. Iyo Inodakadza Kumahombekombe Guta MuFrance: Saint-Malo
Nepo Saint-Tropez naNice vari 2 yemaguta akakurumbira emahombekombe muFrance, Saint-Malo muBrittany panzira yeChirungu igungwa yakavanzika chiwanikwa. Izvi ndezvekutenda kune yakapfuma nhoroondo uye nyaya dzakaitika pamahombekombe eSaint-Malo. MuSaint-Malo, iwe unodzokera shure munguva yenguva dzevapambi, uye French corsairs, kurwisa nekudzivirira Grand France kubva kumadziro.
nhasi, Nzvimbo dzakasarudzika dzeSaint-Malo dzakanaka pakufamba-famba kutenderera guta rekare, kuyemura kuvira kwezuva, uye vachiona mafungu. Kuti unzwisise zvizere runako rweSaint-Malo unofanirwa kugara usiku uye kushanyira zviwi zveGrand Be nePitit Be forts.
3. Yakanaka Coastal Town MuEurope: Lerici, Itari
Havasi vazhinji vakanzwa nezve Lerici taundi muItari Riviera, rimwe remaguta akanaka kwazvo emahombekombe muEurope. Muvakidzani waro guta rechiteshi cheLa Spezia rinogona kunge riri pekutanga rwendo rwako kuCinque Terre, asi Lerici ane mashiripiti ake asina kuzivikanwa. Uchawana Lerici 8 makiromita kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweLa Spezia, nedzimba dzakapendwa, coves, chiteshi chengarava, imba yezana ramakore gumi nemaviri yakatarisana negungwa, zvinoshamisa maonero, uye Hiking mudungwe munzira achitevedza mahombekombe.
Uyezve, Lerici inoshamisa nzvimbo yepasi yerwendo rwako kuenda kumahombekombe eItari: Iyo inonakidza Cinque Terre, Portofino, uye Portoverane. Iwe unogona zvakare kuita yezuva-rwendo kuenda kune inofadza Pisa.
4. Akanaka Mhenderekedzo yeguta MuFrance: Cassis-Marseille
Mawere ematombo, yakajeka pristine mvura, panoramic maonero emahombekombe kubva munzira dzepamugwagwa, gadzira Cassis iro rinodisisa guta regungwa. Cassis iri pakati penzvimbo refu kwazvo pamhenderekedzo yegungwa muEurope, Cap Kanaille, uye chena chena matombo Calanques. Uyezve, muCassis, iwe uchawana zvakanakisa zvepasirese – Provence minda yemizambiringa, uye Gungwa reMediterranean rakanaka kwazvo.
Kusungirira pagirazi reRose wine, vachiona varedzi, chichava chiitiko chekuzorora kwako mune ino mashiripiti emahombekombe dhorobha. Ichi chiFrench Chakavanzika gem chitima chinokwira kubva kuMarseille, uye yakakwana kupukunyuka kubva kune rakabatikana guta.
Paris kuMarseilles Ine Chitima
Marseilles kuParis Nechitima
Marseilles kuClermont Ferrand Nechitima
Paris kuenda kuLa Rochelle Nechitima
5. Arromanches-Les-Bains MuFrance
Inozivikanwa nezveKumhara kweNormandy, Arromanches iguta rakanaka remahombekombe mudunhu reNormandy muFrance. Kupesana neuto remauto raimbove, nhasi iwe unowana inoshamisa yegungwa taundi pamhenderekedzo yeAtlantic.
saka, uri kuzororo risingakanganwike negungwa, ne scuba diving, yachting, kutasva bhiza pamhenderekedzo yegoridhe, nekugeza-zuva. Kwevhiki pfupi kana refu, iwe uchanakidzwa negungwa pamwe neArromanches-Les-Bains’ 550 vagari, uye uwane iyo Normandy mashiripiti.
Paris kuenda kuRouen Nechitima
Paris kuenda kuLille nechitima
Rouen kuBrest Nechitima
Rouen kuLe Havre Nechitima
Iwo mahombekombe eCornish anotambanudzira kusvika 679 makiromita emawere, mumapako, uye mahombekombe. Izvi zvinowedzera kune chinzvimbo cheCornwall seguta rakanakisa rekusevha muUK. saka, kana uri kuronga kuwedzera zviitiko zvemitambo yemvura kuzororo rako pagungwa, Cornwall yakakwana.
Guta rakanakisa pamhenderekedzo kuGreat Britain ipeninsula yakanaka. saka, chero kwaunoenda, iwe unozviwana wakamira pamhenderekedzo inoshamisa. Kune akanakisa maonero emahombekombe akanakisa eCornwall nemahombekombe, unogona kufamba nzira yeSouth West Coast.
7. Honfleur Coastal Town MuFrance
Kana iwe uchitsvaga yakanakisa mhenderekedzo yegungwa muFrance, ipapo Honfleur ndiyo mhinduro. Panzvimbo yemusangano yerwizi Seine uye gungwa, rwizi kufamba kwokunakidzwa, dzimba dzine mavara dzinoonekera mugungwa, uye anofamba pamhenderekedzo, gadzira Honfleur imwe yeiyo 10 maguta akanaka kwazvo emahombekombe muEurope.
Gumiguru inguva yakanakisa yekuenda uye unakirwe nemarina uye yegungwa mweya mutsva muHonfleur. Ichave iri nzira huru yekutaurisa zhizha uye kunyudza zuva uye kudzivirira humhutu, uye mapoka evashanyi.
Rouen kuParis Nechitima
Paris kuCalais Ine Chitima
Rouen kuCalais Nechitima
Santa Cesarea Terme iguta rinoshamisa remahombekombe muPuglia. Kutarisana negungwa, uchawana kunakirwa negungwa rakanaka uye mabhati anodziya pazororo rako reItaly.
Kusiyana nemamwe madhorobha emahombekombe ane mavara muItari, Santa Cesarea anosiyaniswa neayo Islamic chivakwa. Izvi zvinoreva, chena anoyevedza dzimba uye shongwe dzakakomberedza guta, uye tarisa wakanaka zvachose negungwa rebhuruu pairi. Kana iwe ukafunga kushanyira ino yakanaka mhenderekedzo yeguta, unogona kuita rombo rakanaka kuti ugare mune imwe yedzakawanda dzakashandurwa dzimba-mahotera mutaundi.
Naples kuenda kuBrindisi Nechitima
Naples kuenda kuBari Nechitima
Bari kuFasano Nechitima
Naples kuenda kuFasano Nechitima
9. Brugge (kushandiswa), Bherujiyamu
Guta Rekare reBrugge nderimwe remakanyanya inofadza guta rekare nzvimbo muEurope. Brugge zvakare inobata zita racho seimwe yeiyo 10 maguta akanaka kwazvo emahombekombe muEurope. Bruges pagungwa chinhu chinoshamisa kuona kumeso, nemigero yayo, mabhoti, nedzimba dzinoyevedza.
Nemahombekombe akanaka, hazvishamise madzimambo mazhinji eFlemish akasarudza, Brugge semusha wavo. saka, iwe unofanirwa kuve wakagadzirira nhamba hombe kwazvo yedzimba neshongwe dzakatarisana negungwa.
10. Venice, Itari
Guta rakanaka reVenice rinovhara yedu 10 maguta akanakisa emahombekombe muEuropeanonyorwa. Iyo yekuvakisa, gelato, uye chikepe Vatasvi ita kuti Venice ive mhedzisiro yekurota negungwa.
Venice inogara pagungwa, uye ndosaka iri riri rekupedzisira mhenderekedzo yeguta muEurope yose. VokuItaly vanonamata Venice, uye vashanyi vanozvinamata zvakare. Uchave nenguva inoshamisa yekufamba-famba munzira uye munzira dzakamanikana.
pano pa Save A Train, isu tichave tichifara kukubatsira iwe kuronga rwendo rwako kuenda ku "10 Akanaka Kwazvo Mahombekombe Maguta MuEurope".
Iwe unoda kusimbisa yedu blog positi "10 Akanyanya Kunaka Mahombekombe Maguta MuEurope" kupinda yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-coastal-towns-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
netsons netsons CoastalTown frenchriviera Coast travelengland